လုပ်ချင်တာနှင့် လုပ်သင့်တာ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လုပ်ချင်တာနှင့် လုပ်သင့်တာ …
လုပ်ချင်တာနှင့် လုပ်သင့်တာ …
Posted by weiwei on Jul 28, 2011 in Creative Writing, Think Tank | 20 comments
လုပ်ချင်တာကတစ်မျိုး လုပ်သင့်တာကတစ်မျိုး၊ စားချင်တာကတစ်မျိုး စားသင့်တာကတစ်မျိုး၊ နေချင်တာကတစ်နေရာ နေသင့်တာကတစ်နေရာ၊ ချစ်ချင်တာကတစ်ယောက် ချစ်သင့်တာကတစ်ယောက်၊ ၀တ်ချင်တာကတစ်မျိုး ၀တ်သင့်တာကတစ်မျိုး စသဖြင့် မတူညီမှုတွေ ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ ထပ်တူမကျမှုတွေ လောကကြီးထဲမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ကြုံနေကြရမှာပါ …
အသိဥာဏ်ရှိသူများကတော့ လုပ်သင့်တာကိုပဲ ရွေးချယ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ပုံစံခွက်ထဲမှာ နေထိုင်ရင်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေထိုင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရသာမကြိုက်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် သင့်တော်သည့်အစားအစာများကို စားသောက်ခြင်းဖြင့် အသက်ကို စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ သင့်တော်တာကို ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် စိတ်လွတ်လပ်မှုကိုချုပ်တည်းပြီး ဂုဏ်ရှိအောင်ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို လက်မတွဲသင့်တာနဲ့ မချစ်ပေမယ့် သင့်တော်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ပြီးအိမ်ထောင်တည်ထောင်ကြတယ်။ မိဘအိမ်မှာနေချင်ပေမယ့် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း မြို့ကြီးပြကြီးမှာ သွားနေရင်း ဘ၀ကို ရုန်းကန်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက် ပုံစံခွက်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ပြီးချိန်မှာ စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးဖြစ်လာပါတယ်။ လုပ်သင့်တယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့တဲ့အပြုအမူ အတွေးအခေါ်တွေကို ငြီးငွေ့လာပါတော့တယ်။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး အသက်တိုတိုနေရတာနဲ့ လုပ်သင့်တာလုပ်ပြီး အသက်ပိုရှည်တာ ဘယ်ဟာကောင်းသလဲဆိုတဲ့ အတွေးဝင်လာပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက် မိုင်လိုတစ်ခွက်သောက်ရင်းနဲ့ တစ်ခုစဉ်းစားမိတယ်။ ကျွန်မအနှစ်သက်ဆုံးက ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ယာထပြီး ကော်ဖီတစ်ခွက်သောက်လိုက်ရင် အားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီး တစ်နေ့တာအတွက် အဆင်ပြေသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ကော်ဖီသောက်ဖို့အဆင်မပြေလို့ သောက်သင့်တဲ့ မိုင်လိုကို သောက်ပါတယ်။ မိုင်လိုတစ်ခွက်ကို ဆေးတစ်ခွက်လိုသဘောထားပြီးသောက်နိုင်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မှုမရပါ။ အဲဒါနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည် တစ်ခွက် ထပ်သောက်ပြန်တော့လဲ မဟုတ်သေးပြန်ဘူး။ ဘီစကစ်နဲနဲထပ်စား၊ အသီးနဲနဲထပ်စားနဲ့ စားလိုက် သောက်လိုက်နဲ့ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသာကုန်သွားတယ် မူရင်းဆန္ဒကို မပြည့်နိုင်ခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံး မထူးပါဘူးဆိုပြီး ကော်ဖီသောက်လိုက်မှပဲ အားလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပါတယ်။
အဲဒီမှာ ဘာစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ အစကထဲကသာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို သောက်လိုက်ရင် ကျန်တာဘာမှလိုအပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အချိန်နဲ့ငွေ ပိုကုန်သွားတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ဥပမာပေးလိုက်ပေမယ့် တခြားအရာတွေမှာလဲ အတူတူပါပဲ။
လုပ်ချင်တာနဲ့လုပ်သင့်တာ လွန်ဆွဲလေ့ရှိပေမယ့် လုပ်သင့်တာက အမြဲတမ်းအနိုင်ယူသွားတာကြာလာတော့ ဘ၀ဆိုတာကြီးကို ငြီးငွေ့လာပါတယ်။
အခုနေသာ လုပ်ချင်တာချည်းပဲ လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ …………
အန်တီဝေပြောသလို လုပ်သင့်တာ တသက်လုံးလုပ်ခဲ့လို့ ဘဝအဓိပ္ပါယ်ပျောက်ဆုံးတယ် ဒါကြောင့် လုပ်ချင်တာလည်း လုပ်ဖို့လိုမယ်။ သို့ပေသည့် အသက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ လုပ်သင့်တာပဲလုပ်တာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ…။ အသက်ကြီးလာမှ ပိုပြီးကိုယ့်အသက်ကို ပိုချစ်တတ်လာသလိုပဲ..
ဟုတ်တယ် မဝေရယ် …
တစ်ခါတစ်လေများ ကိုယ်လုပ်ချင်တာက တစ်မျိုး လုပ်သင့်တာ ဖြစ်သင့်တာက တစ်မျိုးပေါ့
အဲတော့လဲ လုပ်သင့်တာကိုပဲ ဦးစားပေးလိုက်ရတာများပါတယ်..
အခုလောလောဆယ်မှာ လုပ်ချင်တာတွေသာ လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ..
အလုပ်တွေ သင်တန်းတွေကို ခဏပစ်ထားခဲ့ပြီး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူနဲ့ ပင်လယ်ကြီးကို ကြည့်ဖို့ ခရီးထွက်ချင်တယ် အေးအေးဆေးဆေးစိတ်ကြိုက် အနားယူပြီး စားချင်တာတွေစားပစ်လိုက်ချင်တယ် …
ဟုတ်တယ် မဝေရေ လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာ အံ့မ၀င်တာ အတော်ကြာပြီ။ လုပ်သင့်တာပဲ အမြဲဦးစားပေးရလို့ တခါတခါ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲတောင် မသိတော့ဘူး။
အခုတလော ဒါလဲမဟုတ် ဟိုဟာလဲမဟုတ်နဲ့ ဂဂျီဂဂျောင်စိတ်တွေများလာတာနဲ့ ဆင်ခြင်မိတော့ လုပ်ချင်တာကို မလုပ်ရပဲ လုပ်သင့်တာတွေချည်းလုပ်နေလို့ပါလားလို့ သိသွားတယ် …
အဲဒါနဲ့ပဲ လုပ်သင့်တာကိုလဲ မလုပ်ပဲပေကပ်နေပြန်တော့ ပိုဆိုးလာပြန်ရော …
စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်ဖို့ တော်တော်ခက်ပါလားနော် …
ကျွန်တော်လဲလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးဘ၀က်ို ၁ နှစ်လောက်ဖြတ်သန်းဖူးတယ်။ထင်သလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ ချမ်းသာမှုအစစ်အမှန်က်ို ရှာကြည့်ပါလား။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့လောကီချမ်းသာနဲ့ အစထောင်းသောင်းမက ကွာတယ် ဆိုထားပါတယ်။
အဲလို နည်းနည်းစီစားတော့ ပိုဝလာမှာပေါ့ မမဝေရဲ့… အဲနည်းလေးလည်းမဆိုးပါဘူး။ လောကမှာ ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်လို့ ခွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိအောင် တစ်ခါတလေေ၀၀ါးသွားမိတာကိုရော ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ…
တကယ်တော့ လုပ်ချင်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာကို သမာသမတ်ကျကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လုပ်သင့်တာတွေကို ထည့်သွားလို့ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လုပ်ရင်းနဲ့ ကျရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကနေ ကိုယ့်ရဲ့ကျရှုံးမှုကို ကျေနပ်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်လိုက်ရတယ်လေ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ လုပ်သင့်တာကိုပဲ ဦးစားပေးပြီးတော့ လုပ်ချင်တာကို နောက်ချန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်သွားပါစေဦးတော့ ငါလုပ်ချင်တာ မလုပ်လိုက်ရပါလားဆိုတာ မသိစိတ်ရဲ့ လွန်ဆွဲမှု အင်အားက သေရာတောင် ပါသွားနိုင်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်ကတော့ ကျနော်လုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာ လုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေကို လုပ်ဆောင်သွားတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးကို ပိုကြိုက်တယ်။
အလယ်အလတ်.. ဘယ်ဖက်မှအစွန်းမရောက်ပဲ.. လုပ်သင့်တာနဲ့..လုပ်ချင်တာကို..အသက်အရွယ်(ခန္ဓာကိုယ်က ပေးနိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ) နဲ့.. ချိန်ဆလုပ်နေရင်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်..။
ငယ်တုံး သောက်နိုင်တယ်ထင်တုံးမှာ ကော်ဖီသောက်ချင် ကော်ဖီသောက်ပြီး.. ၀ိုင်သောက်ချင် ၀ိုင်သောက်ဖို့ပဲ..။
အသက်ကြီးလာတော့… ကျမ်းမာရေးချိန်ဆပြီး.. ကာဖင်းပါတာ..အလွန်အကျွံမသောက်ရတာမျိုး.. သတိထားရတဲ့အချိန်မှာ… ကော်ဖီအတု.. ဒီကဖ်သောက်ချင်သောက်မှာပေါ့..။
ကမ္ဘာပါတ်ခရီးမှာ.. တောင်မြင့်တွေတက်တာ ရှောင်ရတော့မှာပေါ့…။ အဲဒါမျိုး..။
ကိုရင်ဖြိုး ပြောထားတာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ မြင်မိပါတယ.်.။
လုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာ လုပ်သင့်တဲ့ဟာတွေကို လုပ်ဆောင်သွားတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးပေါ့…။
ထပ်ဖြည့်ချင်တာက.. ငယ်ရွယ်တုံး.. လုပ်ချင်တာတွေကို ဦးစားပေးနေပြီး.. အရွယ်ရလာရင်… လုပ်သင့်တာကို ..ပိုအလေးသာပေးတာမျိုး…။
သူကြီးဆွေးနွေးပေးသလိုမျိုးပေါ့ … အသက်အရွယ်ရလာချိန်မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ချင်ရက်နဲ့ မလုပ်ခဲ့တာတွေကို နောင်တရလာတာမျိုး …
ငယ်ငယ်တုန်းက သတ္တိကြောင်ခဲ့တာတွေ အခု အရွယ်ရလာတော့ လုပ်ချင်ရက်နဲ့ မလုပ်သင့်တော့လို့ စိတ်လျော့ရတာမျိုး …
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငယ်ရွယ်တုန်းမှာ လုပ်ချင်တာကို ဦးစားပေးတာ ပိုကောင်းတယ်လို့ပဲ ထင်မြင်မိတယ် …
ခုတလောတော့ လုပ်ချင်တာထက် လုပ်သင့်တာကို လုပ်နေရတယ်
နဲနဲတော့ “ဟ” ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။
ငယ်ငယ်က စာမေးပွဲနီးရင် စာကျက်ရမယ်ဆိုပြီး ဦးဏှောက်ကစိတ်ကို တင်းထားတယ်။
စိတ်ကလည်း စာမဖတ်ချင်ဘူးဆိုပြီး ဦးဏှောက်ကို ဆန့်ကျင်တယ်။
အဲလိုနဲ့ စာဖတ်ပြီး စိတ်မ၀င်စားတော့ အချိန်ကုန် လူပမ်း အကျိုးမရှိဖြစ်နေရော။
နောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စိတ်ကို “ဟ” ပေးလိုက်ပါဆိုတဲ့ အကြံပေးတယ်။
အဲဒါနဲ့ စာကို မဖတ်ချင်ပဲ မဖတ်ဘူးဆိုပြီး တစ်ရက်လောက် အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ စိတ်တိုင်းကျနေလိုက်တာ……………
နောက်နေ့လည်းကျရော စာမေးပွဲနီးပြီး စာတွေကလည်း မဖတ်ရသေးဘူးဆိုပြီး စိတ်ကပူလာတယ်။ စာဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာပြီး ဆက်တိုက်ဖတ်လိုက်တာ ၁ရက်ထဲကို အရင် ၂ရက်စာမက စာတွေပြီးသွားတယ်။
ခုချိန်ထိ အဲဒီနည်းစနစ်ကို သုံးတုန်းပဲ။
မလုပ်ချင်တာကို မလုပ်ပဲ နေကြည့်လိုက်ပါ။ အသိတရားက သူ့ဖာသာသူ ထိန်းကျောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ပုံစံခွက်ထဲမှာ နေတဲ့ ဘ၀နဲ့ နေသားကျနေတော့ ပုံစံခွက် မရှိလည်း ပုံစံခွက် အတိုင်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။
လိမ်မာတာ ကောင်းပေမဲ့ လိမ်မာ လွန်းရင် အခွင့်အရေးဆုံးရှုန်းတယ်။
လိမ်မာ ရမှာတောင် ကြောက်မိတယ်။ ပုံစံခွက် ဘ၀နဲ့ နေသားကျနေတော့ ပုံစံခွက် အတိုင်းပါပဲ။
ကျွန်တော် ဆယ်ကျော်သက် ဘ၀ကတည်းက ခံယူချက်က သူများကို စ်ိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဘူး ဆို လုပ်ချင်တာ အကုန်လုံး လုပ်တယ်။ လုပ်သင့်တာထက် လုပ်ချင်တာကိုပဲလုပ်တယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်က တော့ လုပ်သင့်တာကို စိတ်ဝင်စားဖို့ က ပတ်ဝန်းကျင် ရဲ့ စေ့ဆော်မှုလိုအပ်တယ်ထင်တာပဲ။ ကျောင်းတက်တုံးက တစ်နှစ်ပတ်လုံး စာကျက်ပြီး စာတော်တဲ့သူ တွေကို အားကျပေမဲ့ အဲဒီ စာတော်တဲ့လူ တွေ ဘာအဖိုးတန်တာလဲ ဆိုတာကို တစ်ခါ မှ မစဉ်းစားဖူးဘူး။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စာကျက်တာလဲမလုပ်ဘူး။ စာမေးပွဲ နီး ရင် တော့ စာကျက်တယ်။ မိဘပိုက်ဆံကို မဖြုန်းသင့်ဘူး ယူဆလို့တစ်နှစ်တစ်တန်းတော့ မှန်မှန်လေး အောင်သွားအောင် လုပ်တယ်။ စာတော်တဲ့လူ စာရင်းတော့ တစ်သက်လုံး တစ်ခါမှ မ၀င်ဖူးဘူး။ အခု ထိလဲ ဒီလိုပဲ စိတ်မပါတာကို အတင်းလုပ်တဲ့ စိတ်က မရှိဘူး။ လုပ်သင့်မှန်းတော့သိပါတယ်။ ဥပမာ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတာမျိုးပေါ့။ အသက်ကြီးလာတော့ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတာမျိုးတော့ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ မလုပ်ချင်သည် ဖြစ်စေ လုပ်ရမယ်ထင်တာပဲ။ ကော်ဖီလဲကြိုက်တော့ သေရင်သေပါစေ တစ်ရက်ကို မနက်တစ် ခွက်တော့ သောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အခုတော့ ကျန်တဲ့ အချိန် တွေမှာမသောက်တော့ပါဘူး။ ရလဒ်ကတော့ နေရာ တစ်ခု ခု မှာတော့ ထွန်းပေါက်တာမျိုး တော့ မရှိဘူး။ သူများအားကျစရာ ဘ၀မျိုးလဲမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဘ၀ အတွက် တော့ နောင်တရစရာ မရှိဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင် တာတွေလုပ်လာခဲ့ရလို့ ။
အဓိက ကတော့ စိတ်ပါပဲ။ လုံးဝမလုပ်ချင် ရင်တော့ အချိန်တွေ အများကြီးအကုန်ခံပြီး သီးခံ မနေပါနဲ့ ။ လူဖြစ်ရတာက ခဏလေး လိုပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စလေးတော့ အချိန် ပေးသင့်ပါတယ်။ စွန့် လွှတ်သင့်တာစွန့် လွှတ်ပြီး သတ္တိမွေးသင့်တာမွေးရတာပေါ့။
လုပ်ချင်တာ လုပ်၊ နောက်မဆုတ်နဲ့။
ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်၊ စိတ်မညစ်နဲ့။
လုပ်ချင်တာ တွေ လုပ်ရရင် ကိစ္စတစ်ခု ပြီးမြောက်အောင်အထိ မညီးမညူ လုပ်နိုင်တယ်။
ကောင်းတာ ဆိုးတာ၊ အောင်မြင်တာ ကျဆုံးတာ ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှ အဖြေထွတ်တာမို့လို့ လုပ်ချင်တာကို အရင် လုပ် လိုက်တာ အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်က ကောင်းတာလုပ်ဖြစ်သွားလို့ အောင်မြင်သွားတာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်ကျိုးပေးတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်က ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလိုက်တယ်ဆိုရင် အတိုင်းထက်အလွန် ကျေနပ်မိမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုက မအောင်မြင် ဘူး၊ အကျိုးမရှိဘူး၊ ဆုံးရှုံးမှုတွေ နဲ့ ဆိုရင်တော့ စိတ်မညစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
စိတ်မညစ်မှ အမှားအမှန်ကို သေသေချာချာ သိမှာပါ။
ဒါဆိုရင် နောက်ထပ် အလားတူ အမှားမျိုးကို ထပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့…..
အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရင် ဟိုဟိုဒီဒီ ငဲ့ကွက်စရာလေး တွေ စိတ်ထဲရောက်ရောက်လာလို့ လုပ်ချင်တာဘာမှကိုမလုပ်ရသေးသလိုပဲ။ အသက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီ။
ဟိုသတင်းစာထဲပါပါနေတဲ. ခပ်ပုပု ငနဲကို
၂ချက်လောက် မျက်ခွက်ကို ထိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်
သတင်းစာထဲပါပါ နေတဲ.ဟိုခပ်ပုပု ငနဲကို
လက်သီးနဲ. ၂ချက်လောက် ဆင်.ထိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်
ကျွန်တော် လုပ်ချင်တာက ဒိုင်လူကြီးနေရာ (မြန်မာ-အိုမန်ပွဲ) တကယ်လုပ်သင့်တာက မြန်မားဂိုးပေါက်ကို တံတိုင်းကာ ပေး၇မှာ။